China Tubular Bandage orinasa mpamokatra sy mpamatsy | ASN
• Akanjo malefaka, ahazoana aina, mety. Tsy misy fiovana aorinan'ny fanamafisana ny mari-pana
Elastika avo, azo nosasana, tsy azo esorina.
Ny fanitarana dia manodidina ny 180%.
Fatorana famatorana mahery vaika maharitra amin'ny elastika avo lenta amin'ny famatrarana azo fehezina.
Fonosana: fonosana baoritra
Fotoana famaranana: ao anatin'ny 3 herinandro manomboka ny datin'ny fanamafisana ny baiko
Fandefasana: Amin'ny ranomasina / rivotra / express
F: orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
A: Orinasa manana alàlana fanondranana izahay
F: Ahoana ny fehezan-dalàna momba ny fandoavam-bola?
A: Manaiky fametrahana 30% izahay, ary fifandanjana 70% alohan'ny fandefasana.
F: Ahoana no ahazoako santionany?
1.Voninahitra izahay manolotra anao santionany. Ny mpanjifa vaovao dia antenaina handoa ny sarany sy ny santionany, izany vola izany dia hesorina amin'ny fandoavana ny filaminana ara-dalàna.
2.Momba ny vidin'ny mpandefa hafatra: afaka mandamina serivisy RPI amin'ny Fedex, UPS, DHL, TNT, sns ianao mba hanangonana ireo santionany; na ampahafantaro anay ny kaonty fanangonana DHL. Avy eo azonao atao ny mandoa ny entana mivantana any amin'ny orinasanao mpitatitra eo an-toerana.
F: Ahoana no ataon'ny orinasao momba ny fifehezana kalitao?
A: "Ny kalitao no laharam-pahamehana. Manamafy hatrany ny fifehezana kalitao hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany izahay:
1) .Ny akora rehetra nampiasainay dia sariaka amin'ny tontolo iainana;
2) .Ny mpiasa mahay dia miahy ny antsipiriany rehetra amin'ny fikirakirana ny famokarana sy ny fanangonana entana;
3) .Ny sampana fanaraha-maso kalitao tompon'andraikitra manokana amin'ny fizahana kalitao isaky ny fizotrany.
Previous: Fatorana fametahana tena
Manaraka: Fatorana plaster